» नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग ४ (भिडियो)
नकआउट राउण्डमा भिड्नेहरु, भाग ४ (भिडियो)
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:१०
चन्द्र घलान, २४ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको चौथो भागमा नकआउट राउण्डका लागि छानिएका थप ४ जना प्रतियोगीहरु बलबहादुर राजवंशी, जमुना बान्तावा राई, पृथ्वी खनाल र वैशाली लामाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । नकआउटका लागि छानिएका अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
बलबहादुर राजवंशी, झापा–ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका १४ औँ प्रतिस्पर्धी हुन् झापाका बलबहादुर राजवंशी । उनले ब्याटलमा जमिर अलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘बस है आमा’ बोलको गीतमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट बलबहादुरले नकआउटका लागि बाजी मारे । झापाको राजवंशी कुलबाट आएका बलबहादुरलाई गायनमा सबै गाउँवासीको साथ छ । गाउँमा नै चिनिएका बलबहादुर कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
जमुना वान्तावा राई, खोटाङ हाल ईटहरी–ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएकी १५ औँ प्रतिभा हुन् खोटाङकी जमुना बान्तावा राई । हाल ईटहरीमा बस्दै आएकी जमुनाले ब्याटलमा सोनिया राईसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘कोपिलामा रंग चढ्यो’ बोलको गीतमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट जमुनाले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि राखेकी जमुनाले एक स्थापित गायिका हुने लक्ष्य राखेकी छिन् । भ्वाईस अफ नेपालमार्फत आफुलाई सबै माझ चिनाउने आसा राखेकी जमुना परिवारका लागि पनि केही गर्न चाहान्छिन् । सानैमा हजुरआमाले जमुना र उनकी दिदीलाई अध्ययनका लागि भन्दै ईटहरी पुराउनुभएको थियो । प्लस टु सकाएकी जमुना अहिले संगीत पनि सिक्दैछिन् । उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
पृथ्वी खनाल, नुवाकोट–ब्याटलबाट नकआउटका लागि छानिएका १६ औँ प्रतिभा हुन् नुवाकोटका बहुप्रतिभाशाली पृथ्वी खनाल । उनले ब्याटलमा सुरज प्रताप सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘भुलुँ भुलुँ लाग्यो मलाई’ बोलको गीतमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट पृथ्वीले नकआउटका लागि बाजी मारे । आर्किटेक्चर फाईनल एयरका विद्यार्थी समेत रहेका पृथ्वी शशस्त्र प्रहरी बलमा ईन्स्पेक्टर समेत छन् । चिन्ताको साथीका रुपमा संगीतलाई लिने गरेका पृथ्वीले सानैदेखि सेना अथवा प्रहरी बन्छु भन्ने सोच राखेका थिए । उनी सन् २०१० देखि एपिएफमा छन् । उनको ब्लाईन्ड अडिसनम ‘अच्छा लेकिन लढडनको चिसोले’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी कोच दिपको टिममा छन् ।
वैशाली लामा, सिलीगुडी– ब्याटल राउण्डबाट नकआउटका लागि छानिएकी १७ औँ प्रतियोगी हुन् सिलिगुडीकी वैशाली लामा । उनले ब्याटलमा सम्झना तामाङसँग प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘हेरेको तिमीलाई’ बोलको गीतमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट वैशालीलले नकआउटका लागि बाजी मारिन् । भ्वाईस अफ ईण्डियामा समेत भाग लिएकी वैशाली आफ्नै मातृभाषामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएकोमा खुशी लागेको बताउँछिन् । साईबाबाको भक्त रहेकी उनले साई भजनबाटै सँगीतमा पाईला चालेकी हुन् । सानैदेखि गाउन सुरु गरेकी वैशाली सिजन २ को ब्लाईन्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल सातौँ प्रतिभा हुन् । उनी कोच राजुको टिममा छिन् । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
सञ्चारकर्मीले पनि गाए ‘तिम्रो मायाले बाँधेर राख’